February 2010 | LAMINTAYAR
Posted by lamintayar at 4:03 AM Labels: Notes..
လိုယောင်္ကျားမျိုးတွေက ချစ်ဖို့ မတန်တဲ့သူတွေပါ..
တသက်လုံးစိတ်ဆင်းရဲရမှာနဲ့ စာရင် တလလောက်အသဲကွဲပစ်လိုက်တာ လဲရတာတန်ပါတယ်............
၁- လက်ပါတတ်သောသူ( ရန်ဖြစ်တာနဲ့ လူရှေ့ မရှောင် သူရှေ့ မရှောင်လက်သံပြောင် တတ်တဲ့သူတွေလေ...နောက်မလုပ်တော့ပါဘူး
လို့ သူကတောင်းပန်တော့ ချစ်လက်စနဲ့ ကြေအေး..အော်..သူနောက်လုပ်မှာ
မဟုတ်ပါဘူးလေ..လို့ ...ဖူးယောင်နေဆဲ မျက်နှာသေလေးနဲ့ တွေးတော မနေ ပါနဲ
့..ဗီဇက ဖျောက်ဖို့ ခက်ပါတယ်..)
( တသက်လုံး မျက်နှာငယ်ရ ၊ အြေ့ပာအဆိုခံရမှာပါ၊ တခြိမ်းခြိမ်း စကားနိုင်လုပွဲတွေ လဲဆက်နေမှာပါ..)
၃-အလုပ်လက်ကြောမတင်းသူ ( တလောကလုံးက အလုပ်တွေ ကသူနဲ့ပဲ မတန်သလိုလို... အလုပ်လုပ်ရန် နေ့ ရွှေ့ ညရွှေ့ဖင်တပြန်
ခေါင်းတပြန် အပျင်းကြောထူနေတတ်တဲ့သူပေါ့..မစဉ်းစားပါနဲ့ ...တဘ၀စာ ရှာဖွေရမှာ တယောက်တည်း ပင်ပန်းလှပါတယ်)
၄- အခက်အခဲဖြစ်တိုင်း ခေါင်းရှောင်တတ်သူ ( အကြံတုံး ဥာဏ်တုံး..အစွမ်းအစတုံး ငနဲတွေပါ...မိန်းကလေးကပဲ ဦးဆောင်နေရတာပေါ့
ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းမရှိသူမျိုး ကို မချစ်ပါနဲ့ )
၅-ထစ်ခနဲရှိမျက်ရည်ကျပြတတ်သူ (ယောင်္ကျားတန်မဲ့ မျက်ရည်လွယ်သူ တွေလဲ ရှိပါတယ်...ကိုယ့်ကြောင့်ငိုလို့ ကိုယ့်ကိုသိပ်ချစ်တာပဲလို့
ထင်ရင်တော့ ဂိုးပြီနော်....သူက ကိုရီးယားကားကြည့်လဲ ငို ကုလားကားကြည့်လဲ ငိုဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ... အပိုလုပ်သူတွေပါ..)
၆- စကားပြောသိပ်ကောင်းသူ ( သူ့ မှာ မိန်းကလေးတွေ
ပါတယ်... မပတ်သတ်တာ စိတ်ချမ်းသာပါတယ်..သူ့ တော်ကီမှာ
၇- အပျော်အပါးကိုစွဲလန်းသူ ( အဲ့လိုယောင်္ကျားမျိုး က အပေါင်းအသင်းစုံရင် အကုန်လုပ်ပါတယ်..သူမလုပ်ဖူးတာမရှိသလောက်ပါ...
ပိုက်ဆံလဲ အသုံးကြမ်းပြီး...မိန်းမရှုပ်တတ်ပါတယ်...ရှိုးပွဲတကာ..ကလပ်..ကေတီဗီ...အကုန်မှာ သူက ဘုရင်ပါပဲ)
၈-ရောဂါရှိသူ ( နှလုံးရောဂါ။ အဆုတ်ရောဂါ..ဘာညာသာရကာ...ရှိသူတွေပါ..အားမကိုးလောက်ပါဘူး...သူ့ ကိုလဲရှာကျွေးရမယ်..
၉-မုးယစ်ဆေးဝါးစွဲနေသူ ( ကြောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့သူတွေပါ..လူသတ်ဖို့တောင်ဝန်မလေးပါဘူး...ဆေးကြောင် ကြောင်ခဲ့ရင် ကိုယ့်ကို
ချစ်သူမှန်းသိချင်မှသိတော့မှာ..လည်ပင်းညှစ်ပြီး နားကပ် ဆွဲကြိုး ဖြုတ်..ပိုက်ဆံအိတ်လုသွားလို့ရုံးရောက် ဂါတ်ရောက် ကျော်
၁၀- အမေ ကိုသိပ်ချစ်သူ ( ဘယ်တော့မှ လင်ယောင်္ကျားကောင်းဖြစ်မလာပါဘူး...အမေ့ စကားတခွန်းပါပဲ..ယောက္ခမက ဂုံးတိုက်
တတ်တဲ့ သူဖြစ်လို့ကတော့ သေပြီ ဆရာပဲ...မျက်ရည်စမ်းစမ်းနေရမှာပါ... သူ့ အမေ နဲ့စကားများကြည့်..အ်ိမ်ပေါ်ကနှင်ချမယ့်
ကဲ..ကဲ စဉ်းစားလို့ ရတာ တွေ ပြောပြလိုက်ပါတယ်....မိန်းကလေးများ သတိ...သတိ..သတိ
Posted by lamintayar at 6:44 AM Labels: VCD.....
Posted by lamintayar at 5:17 AM Labels: VCD.....
Posted by lamintayar at 4:45 AM Labels: Notes..
“လူဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကို မသိသော ပညာမဲ့သည် လူ့ဘဝကို ကာမဂုဏ် ခံစားဖို့အတွက် အသုံးချ၍ အပါယ်လေးပါးသို့ သွားသည်။ လူဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကို
သိသော ပညာရှိသည် လူ့ဘဝကို ကုသိုလ်ရဖို့အတွက် အသုံးချ၍ နိဗ္ဗာန်သို့
အသက် နှင့် အချိန်
စက္ကန့်၊ မိနစ်၊ နာရီ၊ နေ့၊ ရက်၊ လ၊ နှစ် စသည့်
ထို့ကြောင့် အသက်ကို တန်ဖိုးထားသူသည်
ကုသိုလ်၊ ပညာ၊ ဥစ္စာ သုံးမျိုးအနက်
ဥစ္စာစည်းစိမ် ဆင်းရဲလို့ အပါယ်မကျ။
ကိုယ်ကျင့်သီလ ဆင်းရဲမှ အပါယ်ကျသည်။
ဥစ္စာစည်းစိမ် ဆင်းရဲလို့ မည်သည့် ပညာရှိ သူတော်ကောင်းကမှ အထင်မသေး။
ကိုယ်ကျင့်သီလ ဆင်းရဲမှသာ ပညာရှိသူတော်ကောင်းများ အထင်သေးသည်။
လူဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်သည် ဝမ်းစာရှာဖို့ မဟုတ်၊ အိပ်ဖို့ မဟုတ်၊ စားဖို့ မဟုတ်၊ ကာမဂုဏ် ခံစားဖို့ မဟုတ်။ ကုသိုလ်ပြုဖို့ အတွက်သာ ဖြစ်၏။ တိရစ္ဆာန်တွင် ဝမ်းစာရှာခြင်း၊
အိပ်ခြင်း၊ စားခြင်း၊ ကာမဂုဏ် ခံစားခြင်းဟူသော အချက်လေးချက် ရှိသကဲ့သို့
လူတွင်လည်း ထို့အတူ လေးချက်ပင် ရှိ၏။ ဤလေးချက်တည်းသာ ရှိနေပါက လူသည်
တိရစ္ဆာန်နှင့် ဘာမျှမထူး၊ အတူတူသာ
လူသားသည် ကုသိုလ် (ပရဟိတအလုပ်)ကို လုပ်တတ်၏။ တိရစ္ဆာန်ကား မလုပ်တတ်။
ဤကုသိုလ် (ပရဟိတအလုပ်) ကြောင့်သာလျှင် လူသားသည် တိရစ္ဆာန်ထက် သာလွန်
ပြန်လည်ကူးယူဝေမျခြင်းဖြစ်ပါသည်..ကျွန်တော်၏ အာ ဘော်မဟုတ်ပါ...
Posted by lamintayar at 4:30 AM Labels: VCD.....
ဒီသီချင်းလေးကတော. စိုးပြည်.သဇင် ရဲ. သူကြားပါစေလို. အမည်ရပါတယ် .....အလွန်ကောင်းပါတယ်...
Posted by lamintayar at 4:03 AM Labels: VCD.....
ကျွန်တော်ဆီလာလည်သော သူငယ်ချင်းများအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ site လေးများ ...
Posted by lamintayar at 3:57 AM Labels: လိုအပ်မယ်ထင်သော အရေးကြီးသော site များ.........
http://xhamster.com/movies/144942/horny_amateur_by_fra1.html ကျွန်တော်ြ့ပန်လည် ကူးယူတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ...
Posted by lamintayar at 8:56 AM Labels: မိတ်ဆက် ........
ကျွန်တော်.ဆီလာလည်ဖြစ် တဲ.သူငယ်ချင်းများ ကျွန်တော်ကအခုမှ Blog စတင်လုပ်တာပါ လိုအပ်တာများရှိရင် ပြောကြားပေးပါခင်ဗျာ..ဒီပုံလေးကတော. Funan မှာရိုက်ထားတဲ.ပုံလေးပါ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ စမ်းတဲ.အနေနဲ.တင်ထားတာပါ ခင်ဗျာ..ပဲပေးတာလဲပါတာပေါ. ;pppp ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာတော.ကြာပါပြီ အချိန်မပေးနှိင်မှာ တွေးရင်းမလုပ်ဖြစ်တာကြောင်. ကြာနေခဲ.တာ အခုမှ ဆန္ဒ ပြင်းပြလို. လုပ်လိုက်ပါပြီ ဒီ Blog ဆိုက်လေးကို လိုအပ်တာများရှိခဲ.သော်ပြော်ကြားပေးပါခင်ဗျာ... ကျွန်တော်.ဆိုက်လေးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်သွားပါ.မယ် ..